Dhiyeessaa nyaataa fi Dhugaatii | | Awash Tenders
Dhiyeessaa Nyaataa Fi Dhugaatii
Toke Kutaye Wereda Finance Economic Development Office
Kallacha Oromiyaa Dec24,2020
Godina Shawana Lixaatti Waajiri Maallaqaa fi Walta’insa Dinagdee Aanaa Tokkee Kuttaayee bajaata 2013tif Waldaalee Dhabbataalee Dhiyeesan nyaataa fi Dhugaattiii hojjataan caalbaasii ifaaliin dorgomsiisee Oggeesootaa fi Dhukkubsaatoota COVID-19 Hospitalaa Gudar keessaa jiraanif caalbaasii ifaatiin dorgomsiisee dhiyeesissuu barbaada.
Caalbaasiin kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti gayyaa maxxan fame bahe irraa jalqabee sanada waa’ee Nyataa ibsu kan qabatee guyyoota 21 (Digdamiitokkoo) walittii anaan keessatti Waajjirri Maallaqaa fi Walta’linsa Diinagdee Aanaa Tokkee Kuttaayeetti biiroo lakk, 3qaamaan dhufuudhaan Qar.50(Shantamaa) kan hin deebine kan faluu dhaan bitachuu ni danda’u.
1. Eeyyama hojii kan haroomfatee dhiyeeffachuu kan danda’uu fi Gibira bara 2013 kanfaluu isaaniitiif raga dhiyeeffachuu kan danda’u
2. Galmaa’aa “VAT” / TIN ta’uuisaaniitiif raga dhiyeeffachuu kan danda’an.
3. TIN (lakkofsaaKanfalaaGibiraa ) kan qabu.
5. Dorgomtoonni kabachiisa caalbaasiitiif Gatii dhiyeeseeirraa Parsantii 2% CPO Baankiidhaan mirkanaa’een sanada caalbaasii Orjinaalii fi kooppii waliin dhiyeessuu qabu. Dorgomtoonnan erga Moo’ataa ta’ee booda dhiyaatan waliigaltee mallatteessuu baatan CPOn kabachiisa caalbaasiitiif qabsiisan ni dhaalama.Sanada (DokmentiiCaalbaasii ) dorgomuuf dhiyee fate haqaa fi laaqa kan hin qabne.
6. Sanada caalbaasii gaafa guyyaa 15/04/2013 irraa eegalee hanga 05/05/2013 sa’aatii 3:30 tti Waajjira MWDA T/kuttayeelakk. 3qaamaan dhufuudhaan Qar.50 (Shantamaa)
7. Kan hin deebine kanfaluudhaan bitachuun hangaa Gaafa Guyyaa05/05/2013 sa’aatii 4:00 Sanduuqa Caalbasii Qophaa’eeti Galchuu dandeesuu.
8.Caalbaasiin kun kan banamu gaafama guyyaa 05/05/2013 sa’aa 4:30 Sa’aairratti bakka dorgomtoonni bakka bu’oonni argamanitti kan banamu ta’uu isin beeksifna.
9. Sanadni caalbaasii Orijinaala kophaatti Cuqqaalama,akkasumas koppii kophaatti cuqqalamuu qaba samsaamee Maqaa,Teessoo Bilbilaa Dhabbatichaa fi ChaappaaWaajjirichaan kan mirkana’ee ta’uu qaba kanfaltii Nyaata fi Dhuggatü kaprawwatuu Dhuma ji’a irraatiidha.
10. Humna fi Muxxanoo hojii walfakkatuu kan qabu.
11. Bakkaa fi hojü fi meeshaa hojii kanaaf barbaachisuu hundaa qaama dorgomuutu mijeefataa.
12. Odeeffannoo dabalataatiif Lakk Bilbilaa 0112820731/ 0913063404 Waajjirra Maallaqaa fi Walta insa Diinagdee Aanaa Tokkee Kuttayeti bilbiluudhaan gaafachun ni danda’ama. Waajjiricha Caalbaasii kana gar-tokkeen ykn Gutuumaa Guutuutti mirga guutu qaba. Waajjira Maallaqaafi Walta’insa Diinagdee Aanaa Tokkee Kuttaayee